Curiosities 24 momba ny Antarctica | Meteorolojia amin'ny tambajotra
La Antarctica kaontinanta izay, hatramin'ny nahitana azy (izay inoana fa tamin'ny 1603), dia nahasarika ny sain'ny olombelona. Rehefa dinihina fa boribory ny tany, ary tamin'izany fotoana izany dia efa fantatra fa amin'ny tendrontany avaratra, tena akaikin'ny faritra polar, dia misy faritra kontinanta rakotra lanezy, lojika dia tsy maintsy nisy zavatra nitovy tamin'izany tany amin'ny South Pole.
Tamin'ny taonjato faha-24 dia nanomboka nandany ny fotoam-pahavitrihan'izy ireo tany ireo amerikana espaniola sy tatsimo, na dia mbola mila taonjato iray hafa aza vao hahalala ny fisian'ity kaontinanta mahatalanjona ity, ity Desert White ity. Nanomboka teo dia namoaka tsikelikely ny mistery azy ny Antarctica, saingy ... azo antoka fa misy zavatra XNUMX farafaharatsiny tsy fantatrao momba azy. Curiosities 24 momba ny Antarctica izay hamela anao ho gaga.
Sary - Christopher Michel
Antarctica no efitra lehibe indrindra eto an-tany, tsy misy mihoatra na latsaka noho izany 14,2 tapitrisa km2. Fanitarana tsy mampino, sa tsy izany?
Tsy hahita biby mandady na inona na inona eto ianao. Io irery no kaontinanta tsy misy.
Ny antony hahitanao ireo biby ireo eto, ary ny antony maha sarotra ny fiainana eto na dia mafana ra aza ianao, dia satria voarakitra ny mari-pana ambany indrindra hatreto. Iza? -93,2ºC. Azo antoka fa mihoatra ny iray aminareo te hanana lasopy mafana vitsivitsy, sa tsy izany?
Tsy afaka miasa any Antarctica ianao raha tsy nesorina ny nify fahendrena sy ny tovan-tsampinao. Mampihomehy, sa tsy izany? Fa na izany na tsy izany dia tsy mila ireny faritra roa amin'ny vatana ireny mihitsy isika. Ny voalohany rehefa mivoaka, raha mivoaka dia miteraka fanaintainana be, ary ny iray hafa rehefa manomboka mirehitra dia mety ho lasa loharanon'ny bakteria.
Na dia antsoina hoe bera aza izy ireo tendrony, raha ny marina ao amin'ny arctic ihany no hahitanao azy ireo. Any Antarctica kosa dia hahita penguin maro ianao, toy ilay santionany tsara amin'ny sary etsy ambony.
Sary - Lin padgham
Raha nieritreritra ianao fa misy volkano mavitrika fotsiny any amin'ny faritra mafana sy mafana ... dia diso ianao. Any Antarktika dia misy volkano koa. Ary miasa izy io. Io no any atsimo kokoa. Voatonona anarana Tendrombohitra Erebus, ary mamoaka kristaly.
Sary - 23am.com
Hay Farihy 300 tsy mangatsiaka amin'ity kaontinanta ity izy ireo. Te handroboka ve ianao? Tsia, tsy manao vazivazy aho.
Ny mari-pana avo indrindra izay voarakitra ao amin'ny Antarctica dia 14,5ºC.
Sary - Peter rejcek
Misy faritra amin'ity kaontinanta ity ve tsy avy ny orana na ny oram-panala tsy misy na inona na inona tao anatin'ny 2 tapitrisa taona lasa.
Fa misy katarakta. Ireo izay eritreretinay dia rano mangarahara, saingy eto misy iray izay mena.
Ny mpahay siansa iray any Antarctica dia afaka mampiaraka amin'ny zanany vavy ara-drariny 45 minitra.
Fanamby lehibe ny fiainana eto. Kaontinanta ve mangatsiaka kokoa, manidina, maina kokoa ary ambonimbony kokoa (Ambonin'ny haavon'ny ranomasina 2000m) manerantany. Mbola misy ihany ny olombelona monina any Antarctica.
Saingy tsy misy fandaharam-potoana. Raha ny tena izy, any Antarctica dia tsy misy fandaharam-potoana.
Indray mandeha, 52 tapitrisa taona lasa izay, Nafana dia mafana tahaka an'i California ankehitriny. Izy io dia nametraka ala tropikaly toy ireo any amin'ny faritr'i Amazon, na any Azia atsimo atsinanana. Misy miteny izany izao, sa tsy izany?
Sary - Fitsidihan-javatra
Raha mpino ianao dia tokony ho fantatrao fa misy izany fiangonana kristianina fito any Antarctica.
Antartika ihany no manana ATM 1, izay bar 1,01325, na paska 101325.
Ary na dia tsy oram-be aza, 90% ny rano velona no eto. Eny, mangatsiaka. Fa vokatry ny fiakaran'ny maripana manerantany, raha miempo ny ranomasina dia mety hiakatra metatra maromaro ...
Ny olombelona dia niezaka hatrany (ary mbola manohy ankehitriny) mba hanjanaka ireo habaka sy faritany, eny fa na dia ireo tsy zakan'ny olona aza. Hany ka tamin'ny 1977 dia nandefa reny bevohoka tany Antarctica i Arzantina mba hiteraka any, miaraka amin'ny tanjona tokana hahafahana mitaky ampahan'ny kontinanta. Izy no olombelona voalohany teraka tany Antarctica.
Na dia ho tonga amin'izao tontolo izao amin'ny toerana izay afaka mitsoka hatramin'ny 320km / ora ny rivotra… Fanamby izany.
Ny vongan-dranomandry lehibe indrindra refesina dia lehibe noho i Jamaika: 11,000km2. Saingy nisaraka tamin'ny tanibe tamin'ny taona 2000.
Ny ankamaroan'ny kaontinanta dia rakotra ranomandry maharitra, afa-tsy 1% amin'ny totaliny, izay mitsonika amin'ny fahatongavan'ilay Fahazavana Polar (inona
izay ho lohataona amin'ity tany efitra feno hatsiaka ity).
Fananahana niteraka fiovana kely amin'ny hery misintona faritry ny.
Ny sakan'ny hatevin'ny ranomandry any Antarctica dia sahabo ho eo 1,6km
Chile irery no tanàna monina eto. Manana sekoly, paositra, hopitaly, Internet ary fandrakofana finday izy ireo.
Ankehitriny ianao mahalala zavatra vitsivitsy momba ity kaontinanta mahafinaritra sy mangatsiaka ity. Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Meteorolojia amin'ny tambajotra » sary » Curiosities 24 momba ny Antarctica
Ny frera amin'ny fotoana